Tafakatra 162 ireo matin’ny valanaretina: nandavo olona 6 tao anatin’ny 24 ora indray ny covid-19 | NewsMada
Tsy mbola tafavoaka ny ala ary tsy tokony mandrimandry manana aretina. Niova be indray ny antontanisa amin’ny fivoaran’ny valanaretina fa tsy araka ny andro vitsy teo aloha. Enina ireo nodimandry ary 125 ireo nifindran’ny valanaretina.
Niakatra ho enina indray ireo lavon’ny covid-19, omaly, araka ny tatitry ny CCO. Avy eto Analamanga ny efatra raha any Matsiatra Ambony sy Anosy kosa ny roa hafa. Nitombo indray izany io isa io raha efatra ireo lavo afakomaly ary iray kosa nialoha izany. Tafakatra 162 izany izao ireo matin’ity valanaretina ity, hatramin’ny 19 marsa noho mankaty.
Niakatra koa ny isan’ny tranga vaovao raha mitaha amin’ny teo aloha. Miisa 125 izany omaly raha efa nidina ho 80 izany, afakomaly. Avy eto Analamanga ny 49 amin’ireo nifindran’ny valanaretina miisa 125. Manaraka akaiky azy eo ny any Alaoatra Mangoro, ahitana 24 raha 11 ny any Mahajanga. Samy fito avy kosa ny any Marovoay sy Fianarantsoa raha sivy ny any Manakara. Miisa dimy ireo nifindrana’ny covid-19 any Antsiranana ary efatra any Sambava. Telo ny any Antalaha raha roa avy ny tranga vaovao any Antsohihy sy Toliara. Samy iray avy ny any Itasy sy ny any Ambanja.
Miisa 85 ireo marary mafy
Etsy andaniny, miisa 85 ireo marary mafy ka mbola lohalaharana amin’izany ny eto Analamanga. Miisa 54 izany ka mitsinjara ho 29 etsy Befelatanana raha 1O ny etsy amin’ny HJRA. Fito ny eny Anosiala ary enina eny amin’ny CMC Mahamasina. Iray avy ksoa ny « frome grave » eny Andohatapenaka sy Fenoarivo. Manampy ireo ny any amin’ny faritra Vakinankaratra miisa fito sy ny any Matsiatra Ambony, miisa 16. Efatra avy kosa ireo marary mafy any Atsimo Andrefana sy Boeny.
Na izany aza, miisa 251 ireo sitrana soamantsara. Tafakatra 11 780 izany ireo nahafeno ny fepetra ho amin’ny fahasitranana tamin’ireo 13 522 nifindran’ny valanaretina. Miisa 1 580 kosa ireo mbola manaraka fitsaboana amin’izao fotoana izao.
Miisa 50 493 ny fitiliana PCR vita raha 4 179 ny fitiliana eo anivon’ny Genexpert.